I arabia Saodita ny vehivavy sy ny fomba daty azy Iraisam-pirenena ny Fitiavana
Arabia Saodita dia lehibe firenena, sandwiched eo ny Ranomasina Mena, ny tandrefana sy ny Golfa persiana ho ny atsinanana, izay maka ny ankamaroan’ireo any amin’ny Saikinosy Arabo ao amin’ny faritra Afovoany Atsinanana. Fehezin’ny ny fitondram-panjaka miaraka Islamika amin’ny fomba amam-panao, ny firenena nahazo harena ny alalan ny fahitana ny solika sy ny entona ao amin’ny s. Saodiana manana mponina efa ho telo-polo tapitrisa ny olona, mihoatra noho ny antsasaky izay latsaky ny dimy amby roapolo taona, ny tena manjaka ny fiteny arabo. Ny finoana silamo ho lasa lavitra ny lehibe ny fivavahana, indrindra ny andro dia omena ny vavaka sy ny orinasa dia mikatona ny telo na in-efatra isan’andro, mandritra ny adiny iray isaky ny fotoana, ka ny mpiasa sy ny mpividy dia afaka manatanteraka ny fombafomba. Raha tsorina, — na niqab — vehivavy Saodiana dia tsara tarehy, eritrereto ny eny andalana ny tsara tarehy air-hostesses izay endri-javatra ao amin’ny peta-drindrina sy ny dokam-barotra ho an’ny Arabia Saodita Airlines. Na izany aza dia tsy maintsy mahatsiaro fa izany dia firenena iray izay, nijaly ambanin’ny officious Mpianakavin Saud ny didy jadona sy ny Lalàna Sharia, mahita ny vehivavy ho toy ny hoe ambany noho ny lehilahy ary noho izany dia tsy ny tahan’ny ny vavy firaisana ara-nofo tena. Hmm — sarotra ny mamaly azy, satria, araka ny voalaza etsy ambony, vehivavy ity fomba itondrana ny firenena dia tsy mahazo fahafahana ho azy.
Velona ao amin’ny iray amin’ireo kely indrindra maimaim-poana ny toerana eto amin’izao tontolo izao, Saodiana sy ny vehivavy dia voarara tsy mahazo mifandray amin’ny lahy any ivelany ny fianakaviany mivantana. Izany zava-misy tsotra mazava ho azy fa mahatonga azy ho tena sarotra ho an’ny vahiny mba hihaona, aoka ihany daty, iray amin’ireo tena manintona ny vehivavy. Na izany aza, na dia ao izany zava-misy henjana, misy fahafahana miditra amin’ny Aterineto, izay efa hita ho lifesaver ny vehivavy ao Arabia Saodita, ary mahatonga azy ireo hifandray amin ny maimaim-poana izao tontolo izao. Na dia nanohitra mafy tamin’ny fivavahana mahery fihetsika, fahazoan-dalana hitondra fiara vao tamin’ity taona ity no omena ho an’ny vehivavy lehibe fandrosoana any amin’ny obsessive hampihenana ny amin’ny vehivavy’ ny zon’olombelona. Angamba mazava ny zavatra tokony hieritreritra momba ny zava-misy fa indrindra vehivavy Saodiana sy ny tovovavy ho tia mandao ny firenena niaviany ary hifindra amin’ny toerana iray izay ny fahalalahana dia ampahany voajanahary eo amin’ny fiainana. Kanefa, miaraka amin’ny famerana napetraka tamin izy ireo momba ny fanavakavahana sy ny hetsika, dia goavana olana ireo vehivavy ho afa-mandositra ny ambany fifehezan’i ny fianakaviany. Na izany aza, Arabia Saodita toa miasa amin’ny rafitra izay dia miankina amin’ny toerana misy azy. Izany ihany koa dia miankina amin’ny iza ianao, izay tsy mahafantatra, ary indrindra tena, ny maha-ianao anao.
Araka ny voalaza etsy ambony, ny alikaola dia tsy afaka — na aiza na aiza
Na angamba any ny fiainana manokana ny olona iray ao an-trano, ny mponina dia afaka mahazo haingana fitaratra na roa ny divay sy ny tsindraindray tavoahangy ny labiera. Ataovy azo antoka fa tsy misy olona ivelan’ny fianakaviana faribolana no mahafantatra izany.
Arabia Saodita dia maina ny firenena, isaky ny hevitry ny teny
Tena nisy fiantraikany teo amin’ny Indiana, tiorka sy nahandro Afrikana, ny tena sakafo ho hita ao Arabia Saodita dia mihodina manodidina nadininy ny hena — zanak ondry, ondry na ny akoho — izay matetika aroso miaraka amin’ny vary sy ny fisaka, mofo tsy misy masirasira. Rehetra ny fiompiana dia tokony ho novonoina araka ny Halal fomba amam-panao, sy ny henan-kisoa dia hentitra voarara. Noho izany, dia aza manantena na inona na inona bacon ao amin’ny sakafo maraina ny fotoana. Na dia azo atao ho an’ny tsy-Miozolomana mba hitsidika ny Grand Maoske ao amin’ny tanàna masina any la mecque, fa zava-dehibe ny mahatakatra fa ireo tanàna roa endriky ny fo sy fanahy ny zavatra rehetra Silamo. Eny tokoa, Medina dia an-trano ny Moske ny Mpaminany izay misy ny fasan’i Muhammad, izay ny fampianarany dia mifototra amin’ny Andry dimin’ny finoana Islamo, ary izay mpanara-dia azy efa nandresy ny ankamaroan ny ao Afovoany Atsinanana, Azia, Afrika Avaratra, Espaina ary lehibe ny fizarana Frantsa noho ny tapaky ny volana fahavalo tamin’ny taonjato AD. Amin’ny rehetra ny ambony faneriterena eo amin’ny toerana, angamba iray amin’ireo fomba mora indrindra ny fivoriana ny vehivavy sy ny tovovavy avy any Arabia Saodita no mba hanatevin-daharana ny iraisam-pirenena na ny volon-koditra dating service, toy ny Iraisam-pirenena ny Fitiavana sy ny eHarmony, izay afaka hihaona tokana olona avy amin’ny faritra rehetra izao tontolo izao izay mitady olona toa ANAO. Rehefa voafidy ny asa fanompoana, dia tokony hanao sonia sy hanaiky ny fiainana Manokana ny Politika. Ianao dia tsy maintsy mamorona ny mombamomba mampiaraka, izay tokony ahitana vaovao momba ny tenanao, ary koa ny hanome hevitra ny sasany amin’ny karazana olona tadiavinao. Na oviana na nomena fotoana misy ara-bakiteny an’arivony ny olona mitady ny alalan ireo mombamomba, ary noho izany dia tena zava-dehibe noho ny mombamomba azy mba ho noforonina amin’ny fomba toy ny mitsangana avy any amin’ny fitsaharana sy ny misarika ny sain’ny olon-kafa. Na izany aza, tsy hanoratra be loatra — tsy misy olona te hamaky ny lahatsoratra. Ny andalana vitsivitsy dia tokony ho ampy, fa ho azo antoka izy ireo no fohy sy manintona, ampy mba hilaza amin’izao tontolo izao ny maha-ianao anao sy izay tianao.
Azonao atao ihany koa ny manampy ny sary iray na roa
Ankoatra izany, ireo no tokony ho ilay tena lahatsoratra, tsy sary-niantsena dikan ny olo-mahery. Tsarovy, amin’ny andro LEHIBE ny HIHAONA amin’ireo mpiara-miasa dia miandry ny mahita ny olona iray ihany izy ireo raiki-pitia izy ireo rehefa mamaky ny mampiaraka toerana mombamomba
← Dia mampiaraka ny teny arabo lehilahy. Yahoo Answers
Chat arabo Maghreb, maimaim-poana Hahita ny lehibe indrindra chat arabo Maghreb →